Emphakathini wanamuhla, njengoba imigwaqo kuleli zwe kungacacisa ukuthi izinga layo ukuthuthukiswa komnotho. Ngeshwa, eRussia, ngalo mqondo akusiyo zonke ezinhle, kodwa into esemqoka ukuthi isebenza ukuqeda off-road, siqala kancane, kodwa kuyaqhubeka.
Uhlu othelawayeka federal Russia 2015 zihlanganisa kwemigwaqo exhumanisayo inhlokodolobha ne emazweni angomakhelwane izifunda zezwe.
Ukwehlukanisa imigwaqo abasemakilasini
Kuye ngalokho oxhumene imigwaqo, ngabe yombuso noma umphakathi. Federal kubhekwe:
Imikhondo wabeka phakathi zokuqondisa (elibonakala P incwadi).
Imigwaqo yokuxhuma phakathi komgwaqo omkhulu federal (abe ibheji A).
Zokungena okuholela izixhumanisi ezokuthutha ezinkulu izindawo okubalulekile sikahulumeni.
Ngo uhlelo lwamuva uhlu lwazo zonke emikhondweni imigwaqo ivela eMoscow ukuphendukela kunoma iluphi uhlangothi, ngokuthi uhlamvu "M". Ngokuqondene amathrekhi ezakha amanethiwekhi ezokuthutha international, lezo zitholakala ohlangothini European, ayeshiwo E kanye Asian - NA.
Ngaphezu izincwadi, wabonisa inani komgwaqo, okuyinto njalo ibekwe emva ukuqokwa incwadi. Uhlu imizila federal Russian e 2015 kuhlanganisa yonke imikhakha imigwaqo. Ngokwesibonelo, kuphela isiqondiso eMoscow kukhona angaphezu kuka-20 emigwaqweni emikhulu, 10 okuholela Imingcele yamazwe ezifana Ukraine, Latvia, Estonia, Belarus, Finland, Azerbaijan Mongolia.
Zonke imigwaqo federal amagugu ayagcinwa, lilungiswe nezinkonzo wakha kusukela isabelomali noma inhlangano noma abantu wemvelo noma womthetho nabo isivumelwano okuhambisanayo sasayinwa.
M1, okuthiwa encwadini okubhalwa kuyo imigwaqo eRussia njengoba "Belarus", osuka eMoscow kuya ngasemngceleni walelo zwe. Ngaphezu kwalokho, lo mgwaqo ihlanganisa uthi angomakhelwane, iyingxenye komgwaqo E ngamazwe 30 indlela abantu baseYurophu abathuthela kule Asian at No.6 AN.
Abashayeli ukuhamba kulo mgwaqo, niwele nesifunda eMoscow, Odintsovo engakafiki 4 km, bese, abesifazane-Cuban futhi Mozhdysk bawe Smolensk esifundeni. Izikhombisi-ndlela kwenziwe eduze emadolobheni ezifana Gagarin, Vyazma, Safonovo, Yartsevo, futhi endleleni dlula eduze Smolensk kwesokudla kuze kube semngceleni we-Belarus.
M1 is kahle ahlomele travel ephephile futhi zikhululekile. Traffic of ephakeme izinga enamathela, kanti iviyo 4 ukuvumela abashayeli ukuba ukhethe ukuya nabanye velocity. Ukuze ukhululeke, ukulungisa imoto ngokwami, ifake uphethiloli noma ukuthenga imikhiqizo zingafakwa endleleni yokugcwalisa iziteshi, amamotheli nezindawo zokudlela ezinhle.
Into enikeza ukudla, zitholakala cishe zonke km 45. lendlela, phakathi kwezinye imigwaqo federal okuholela izinga surface umgwaqo, futhi iholide ehloniphekile ungathola emahhotela, etholakala eduze maphakathi Smolensk.
Abakwazi nje ushawa ngilale ngokuthula, kodwa futhi ukuchitha isikhathi sauna noma ichibi noma udle ekhaya yokupheka yokudlela, njengoba, ngokwesibonelo, ihhotela "Manor", amahhotela "The Wheel," "Chaplin" nabanye.
Phakathi nohambo lwabo phezu ebekwe emgaqweni onguthelawayeka uM1, ungavakashela ezikhangayo ezifana le edolobheni lasendulo Russian of Mozhaisk, indlwana okuthiwa umama kaNkulunkulu, sise umthombo sokuphulukiswa, isikhumbuzo amasosha dlulisa neMpi Patriotic ka 1812 kanye Vyazma Smolensk Amadolobha nge emathempelini awo nasema-izikhumbuzo bokwakha Russian wedwa kukodwa eyingqopha-mlando.
Ubude yalo mzila kucishe 450 km.
M Umzila 11
Ngaphambili, umgwaqo wawaziwa ngokuthi i-M11 Tallinn onguthelawayeka. Manje isihloko ithrekhi entsha - "Narva" kusukela Petersburg ngokusebenzisa Ivangorod, ukuze komngcele Estonia, lumiswa A 180.
Kuyingxenye indlela European E20, lapho baseRussia bajwayele ukuhamba impelasonto e-Estonia. Ubude umgwaqo 142 km, futhi kuthatha indawo oluwumbukwane ezinamahlathi. Endleleni kukhona 2 amanzi travel izithiyo ngesimo Narva futhi Luga, okuyinto eyaba ngu amabhuloho nge umthwalo amakhono amathani 60 kuya ku-80.
Okuyingozi kuyinto kufika ithuba lika-57 amakhilomitha, okuyinto eyaba imbangela izingozi eziningi. Ngeshwa, le istaladi ezindaweni abampofu asphalt ebusweni ukuthi kufanele kubhekwe uma lihamba ke ebusuku noma ezinsukwini nenkungu.
Umzila kweqa Red Village, Kingisepp (ephumayo 3 km kusukela idolobha) Ivangorod.
Umgwaqo yiyona i-M11 umgwaqo ovulekile phakathi eMoscow St Petersburg. Ludzaba lolubucayi ngale ndlela isayithi ekhokhelwe Solnechnogorsk. Ngenxa lasetulu kakhulu engase ungaxhomeki kuphela imoto ngokwayo, kodwa futhi ku isikhathi sosuku, kuba pheze awunalutho.
Isinqumo ukwakha izinga okusezingeni eliphezulu Hambayo toll road akhulule okuphakade isiminyaminya kuyi-Leningrad wemboni, zehlulekile, njengoba uhambo oluya 1000 r. ngaphandle uphethiloli metering engingeke ngikwazi ukuyikhokhela 90% abashayeli. Izindleko ezinkulu zokuphila, inkonzo abampofu kanye nokuntuleka izinga ukukhanyisa wenze lesi ithrekhi ongaceli.
Ekupheleni 2015, kukhona umbuzo ukuthi amanani for umgwaqo i-M11 ulele ngokungemthetho. Lokhu kunikeza ithemba lokuthi kukhona kuyotholakala isixazululo esingcono kakhulu, kanye nenani ngeke zithuthukiswe. Kulokhu, abashayeli izohamba endleleni yamahhala nge njalo sezimoto, kodwa ngeke kwenzeke ngemva indlela uzobe ovuthayo ngokugcwele, futhi esiteshini gas kanye cafe ezosebenza.
Ngo-2015 uhlu othelawayeka federal Russian kuhlanganisa izindlela eziningi ngilulekela kuka-1000 km. M4 - omunye wabo. It zivela e Lipetsk emgwaqweni enhloko-dolobha, futhi aphelela cishe 1544 km kuya Novorossiysk.
Umlando komgwaqo lwaluqala nekhulu lama-20, kodwa igama layo ( "Dawn"), wathola kuphela ngo-1991, ngemva iSoviet Union iwa.
Nesifunda eMoscow, futhi ine 8 ukuze Vidnoe bands, kuyilapho emva 71 km umgwaqo M4 "Don" unciphise ukuba 6 bands (kufika Saygatova). Ingxenye elandelayo - kuze kufinyelele 110 km - 4 has ngokuhlukana.
Esikhathini Tula esifundeni has ithrekhi 4 emapheshana, okuye kwenziwe kabusha kulo Efrayimi Bogoroditsk. Phakathi imizana ezimbili endleleni esibi, kodwa wakhokha yafakwa kwenye unika abashayeli ithuba lokukhetha: noma ukukhokhela ukunethezeka, noma "ukubulala" imoto esayithini khulula.
I Lipetsk Region 4-indlela eliphezulu komgwaqo, iziteshi ezimbili toll - amadolobha ephumayo Elec, Vanya, Zadonsk futhi Hlevnoe.
Zonke indlela endleleni Voronezh esifundeni M4 "Don" luyimfanelo-asphalt enamathela medium noma ezingeni eliphansi. 4 bands siyizisebenzi ezimbili kuphela mayelana umsebenzi wokulungisa. Ingxenye yomgwaqo isibe ikhokhwe - lokhu dlula Voronezh futhi 544 ngo 633 km.
Through the Rostov esifundeni Kamensk-pass 4 kwindlela-umgwaqo asezingeni elifanele. Lokhu kulandelwa nge kwesigaba esiqinile ziba mbili, okuyinto has a isigaba ephezulu. Ibhuloho phezu Don kwaphinde elilungisiwe ngoJulayi 2015 ube nomugqa wokuvikela noma isihlukanisi phakathi kwalezi zinhlangothi komgwaqo. Kusukela Bataysk kokuzila ngaphambi kokungena Krasnodar isimo esifundeni Ukusabalala kuyinto enhle, kodwa iyona ayingozi kakhulu ingxenye endleleni, njengoba azikho abahlukanisi. Okwamanje, lapho abasebenza kwi ukunwetshwa komgwaqo futhi ukufakwa kocingo ngokuhlukana.
Indlela i-Krasnodar Territory nzima izigaba esiyingozi umzila, okuyinto kusakhiwa. Kufanele kube ngokucophelela ngemva ndima Berezanskaya ngomzana, kusukela kule ndawo kukhona ematfuba abukhali ukuze detour endleleni izinto zokwakha e khona strip asebenzayo eyodwa kuphela ohlangothini ngalunye.
On the yeRiphabliki ka Adygei izinga umzila "Don" kuyinto enhle kakhulu, kungekho ezindaweni eziyingozi.
Kusukela edolobhaneni Saratov esifundeni kanye Krasnodar ukuze Novorossiysk ezindaweni eziningi eziyingozi, ezihlobene nokugcinwa imisebenzi komgwaqo.
Kuwo wonke mzila evuthiwe inkonzo inkonzo, kodwa ngesikhathi ehlobo amakamelo e amahhotela kanye amamotheli kufanele zibhalise kusengaphambili. Izinkinga restock okudla uphethiloli kanjalo akwenzeki ngenxa eziningi amagalaji kanye lula ezitolo eduze kwabo, kanye amathilomu nokudayisa ukudla okungabizi.
"Ural" ubhekwa phakathi kwemigwaqo kufakwe ohlwini imizila waseRussia e 2015, amaloli esimatasa wosayizi omkhulu. Njengoba lokhu obuphelele emgwaqweni 1879 km kuyingxenye European umzila E 30 futhi AN6 Asian futhi ligijima izifunda zezimboni yezwe, bhalisiwe obukhulu kakhulu imoto traffic kuso.
umzila Okokuqala kusuka eMoscow kuya Ryazan lavulwa ngo-1930, lapho embonini yezimoto kwakuseyisiqalo nje ukuthuthukisa eSoviet Union. Ngo-1947, it sinwebiswe Kuibyshev, futhi ngo-1965-ke Lalivulwe traffic eChelyabinsk.
emizileni Iningi M5 "Ural" has umzila owodwa kuphela nokukhokha komnikazi Acres Okuhle Ukuthi bands 2 noma ngaphezulu ohlangothini ngalunye. Ngo kowezi-2000, izingxenye eziningana ngesivinini lwaqala, isibonelo, phakathi nemizana futhi Lower Elyuzan phakathi Tolyatti futhi Krasny Yar nabanye.
umgwaqo federal "Ural" sidlula izindawo:
E-Moscow it ithumba Lyubertsy, ngahambisa izincwajana kuso sonke Bronnitsy futhi Kolomna, kweqa UMfula iMoscow and Oka. izinga enamathela muhle kakhulu.
Okulandelayo - Ryazan esifundeni, endleleni lapho uya round Ryazan, odlula Lezinhlanzi, Shilova futhi Shatsk (ungakwazi ukushayela emhlabeni dlula elisha). Endleleni umshayeli ihlangabezana amabhuloho phezu Prony futhi Tsnu, kanye elalisanda kwakhiwa overpasses yonkana ujantshi amathrekhi, lapho ngaphambili ayelapho izithiyo, lokuqoqa zonke izimoto ku eziningi amakhilomitha.
Esigabeni esilandelayo uhambo - Mordovia. I ethile kuphela ububanzi ezincane komgwaqo.
Ngo endleleni Penza esifundeni ithumba nemizana Mokshan, Ramsay kanye "ucezu" ka Penza.
Ingxenye eyalandela yalolu hambo - kungcono Ulyanovsk futhi Samara ezifundeni, lapho onguthelawayeka kweqa Zhigulevsk ke ichezukela le Orenburg esifundeni kanye Tatarstan.
Umendo Iqonde empumalanga M5 "Ural" Ukushaywa Bashkortostan, ayesesiphethe endleleni kukhona kwemifula emibili - DEMA nobumhlophe.
ukukhuthazwa okuqhubekayo indlela uku Chelyabinsk esifundeni futhi iphela kwedolobha elifanayo.
Uma kuhanjwa kusukela eMoscow kuze kube umzila uya khona, abagibeli ziyashintsha imizila emathafeni ezinamahlathi kuya sezintaba ingxenye, iphuzu esiphezulu okuyinto 830 m, - a Urenga pass. Ebusika ngokuvamile ivaliwe ngenxa iqhwa emigodini.
Kuze kube manje, umzila aqhubeka aguquka, it is avuselelwe, isibonelo, ngo-2013 wavula ibhuloho elisha ngaphesheya komfula Belaya. I esiyingozi kakhulu ingxenye ithrekhi "Ural" ubhekwa indlela eduze nemizana lukaShemi Ust-Katav, okuyinto, ngokusho amaphoyisa omgwaqo, wabulala abantu 50 unyaka ngamunye.
Federal onguthelawayeka M13 buhlobene Bryansk nesifunda yayo, Gomel futhi Brest. ubude bayo - of 221 km, kanye igama elisha - A240.
Le ndlela ubabonisa ngokusebenzisa ebabazekayo sezwe elinamagquma embozwe ihlathi, futhi okhuphukela emaweni futhi ekwehleni, badedelane esiyingozi futhi ezindaweni ukubonakala elinganiselwe. Umgwaqo ifakwe konke okudingayo ukuze, ngisho nge obuphelele esifushane kangaka abashayeli bayo indlela kodwa ngakhula kahle.
Ngu indlela abashayeli uzohlangana 5 iziteshi babangele 3 amatende, SRT 3, isigaba 2 ambulensi kanye 5 gai okuthunyelwe (10, 77, 130, 164 kanye 193 km).
Umsuka lo mgwaqo uba e Bryansk, futhi ngemva kokuwela umngcele Belarusian siqondiswe Gomel. Endleleni, abahambi nazane ne ezikhangayo:
House Museum of A. K. Tolstogo e Red Uphondo, lapho yena wazalwa futhi wangcwatshwa.
Umuzi Pohar, ungavakashela ugwayi ifektri abadumile, lapho ukwenza nogwayi.
Uzijwayeze imikhiqizo lesikhumba kungaba ku ifektri lesikhumba edolobheni elincane Klintsy.
Road M13 has a izinga ebusweni asphalt zonke endleleni.
M 10 no-M 9
umgwaqo federal, sivela e Moscow, futhi namuhla abaziwa ngokuthi nomendo M10 "Russia" has a enye inkondlo elama esihloko sithi "eScandinavia".
Ngu ingxenye "Russian" ka endleleni endleleni yeqiniso yokuxhuma eMoscow nge Tver, Novgorod futhi Petersburg. Ingxenye "eScandinavia" iqala kusukela Petersburg ukuba Vyborg umkhawulo Finnish.
Lena enye yezinhlobo ezingu imigwaqo endala eRussia, ezakhiwe esinqumweni Petru 1 yokuxhuma eMoscow, inhloko-dolobha entsha indlela onobunye, ifakwe amaphuzu ekushintsheni amahhashi (emgodini), lapho ayengase alale khona, ukudla noma uzosinda sezulu esibi.
Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe ukwakhiwa komgwaqo elidala aba nethonya layo elihle ekuthuthukisweni komnotho welizwe ezisemadolobheni, lapho sidlula. Ngakho njengoba kuze kube yimanje umugqa ligijima emadolobheni 65 nemizana, asikwazi ngokuthi ngesivinini ngenxa yesivinini imikhawulo ekhona ngaphakathi emzaneni.
I-M10 umzila "eScandinavia" iya Vyborg kuze kube semngceleni Finnish. Yonke indlela kusuka eMoscow kukhona amamotheli eziningi, izinga lapho ngelanga zokhahlamba kusuka 600 kuya 1700 r. Kukhona futhi akukho ukushoda amagalaji kanye amagalaji.
Ezindaweni eziyingozi kakhulu kulo mzila ayizindawo lapho azikho separators, futhi komgwaqo engakuhlomele kuyingozi, ikakhulukazi ice noma imvula.
M9 umzila "Baltic" evela eMoscow, uya Volokolamsk futhi komngcele Latvia. Njengengxenye ngamazwe umzila E22, it is egcwele phama zesitimela, ugibele besuka eYurophu beya Latvia.
Endleleni, abashayeli niwele imifula ezifana Istria, Vazuza, Meza, Western Dvina nabanye. Excellent izinga enamathela usukela zonke indlela 610 olungamakhilomitha. Ngaphandle incenye lencane endleleni ku Tver esifundeni, yonke indlela iphephile, okuvumela ngesivinini afika ku 140-150 km / h.
Indlela emizileni "Baltic" egcina eMoscow, Tver futhi Pskov izifunda. Kuzo zombili 2007 no 2015. umgwaqo ngaphansi kabusha, futhi ukulungisa umsebenzi uzoqhubeka ku.
Highway M6, M7 futhi M8
Federal Highway M6 "iCaspian" has a ubude 1831 km kanti kuyingxenye European (E119) futhi Asian (AH8) umzila kusuka eMoscow ngokusebenzisa Tambov kanye Volgograd ukuze Astrakhan. Isikhundla ngohlamvu "M" kuyoba kusebenza kuze 12/31/2017, ngemva kwalokho-ke iqanjwe kabusha ngendlela P22 federal ukuhlanganisa izikhungo eziningana zokuphatha yeRussia.
Uma, ekuqaleni isimo isiRashiya, luhamba luye ohlangothini olulodwa kwakubalulekile ukukhula komnotho kanye ukuhweba ezweni Nogai Indlela.
Ukwakhiwa komgwaqo omkhulu "iCaspian" yesimanje waqala emuva ngo-1952 ngensingo kabili emaceleni nge eqinile esigabeni sesibili. Kusayithi yenhloko-dolobha ukuze Kashira base ifakwe 4 imizila. I kakhulu ukwakhiwa kwenziwa ngezigaba. Umgwaqo sokuqala kusukela eMoscow kuze kube Tambov eyalwa, ke wakha ingxenye ukuze Volgograd.
Ngemva iSoviet Union iwa, endleleni iye exhunywe kulo mzila kusukela Volgograd ukuba e-Astrakhan, M6 inikezwa inamba bese igama "iCaspian".
Ingxenye umzila double strip okuqhubekayo, okuyinto ebambezela kakhulu ukuhamba, ikakhulukazi ekwindla. Ngenxa ukugeleza enkulu amaloli, okuyinto balwela zikufice abashayeli baphelelwa yisineke izimoto kule nkathi ngokuvamile zivela "ikhanda on" ukushayisana.
Isici esikhethekile kulo mzila iyona sokungabi nhlobo travel ngokusebenzisa izindawo ezinabantu abaningi.
Highway M7 "iVolga" sinwebe kusuka eMoscow ngokusebenzisa uVladimir, Nizhny Novgorod neKazan ukuze Ufa ku 1342 km. Umgwaqo kweqa eMoscow, uVladimir futhi Nizhny Novgorod esifundeni kanye Chuvashia, Tatarstan futhi Bashkortostan.
On isimo umgwaqo kakhulu kuthonywa nomswakama Meshcherskys emaxhaphozini, esikhathini esidlule lapho sidlule. Le track, kunalokho, zihlukaniswa inqwaba amarobhothi ezindaweni eziningi lapho kwayo. Okwamanje, izingxenye ezihlukahlukene umgwaqo ngaphansi ukwakhiwa kabusha kanye nokwakhiwa kwemisebenzi, ngakho-ke kufanele siqaphele imizila emibili emincane futhi komgwaqo omncane, lapho kunzima ukuwuqondisa.
onguthelawayeka federal M8 "Kholmogory" uxhuma eMoscow, Yaroslavl, Vologda futhi Arkhangelsk. Ubude umgwaqo 1271 km, enganikeza ezikhangayo abahambi ngaphezu kwanoma yimuphi omunye indlela.
I-track "Kholmogory" iyahanjiswa nginqamula eMoscow, uVladimir, Yaroslavl, Vologda futhi Arkhangelsk ezifundeni, lapho ngamunye okwenzeka endleleni zasemizaneni uyinto nokuzwa yezakhiwo kanye zomlando.
Ngokuvamile, isimo endleleni kuhle, kodwa kukhona ukuminyana ngenxa yokudlula esiminyaminyeni sezimoto. Isixhumanisi weakest kuyinto endleleni endaweni Velsk ukuze Arkhangelsk.
Trails M2 kanye M3
Wonke umuntu uya bangabeki ehlobo kuze kufike elwandle, elalidume kakhulu umzila M2 "eCrimea". Endleleni kusuka eMoscow abahambi odlulayo Tula, orel, eKursk futhi Sifundazwe. Lokhu kulandelwa emngceleni Ukraine, ngemva kwalokho endleleni lubalwa-M20 ku-M18 kanye emzini Kharkiv ku, ngokusebenzisa Zaporozhye futhi Simferopol ukuze Yalta.
Eyokuqala ithrekhi "eCrimea" olwaqala ngo-1950 futhi ibanga 720 km, yize umlando wayo iya ekujuleni ekhulwini. Ngesinye isikhathi kwaba edumile YaseCrimea Ndlela, umgwaqo kusukela capital laseKharkov yakhiwa kuleli maphakathi nekhulu le-19.
Elikhulu umsebenzi wokwakha kulo ithrekhi senzeka ekupheleni-70 futhi kuze kube ngasekupheleni 80-yalolucwaningo kwekhulu elidlule. Ngemva kokuphela USSR, futhi ukuhlukana ingxenye 2 emgwaqeni uthi angomakhelwane izivakashi kwehle nokubaluleka kwalo yehlile. komzila womgwaqo Ikhwalithi service enhle endleleni, emshiya endleleni kuze bahle ngisho ehlobo isikhathi umatasa.
I-track M3 "Ukraine" ivela eMoscow nge Kaluga futhi Bryansk komngcele-Ukraine. Ubude indlela - 500 km, wafakwa ukusebenza ngo-1976
Ngenxa yalesi ijubane emgwaqweni umkhawulo esishiwo 90 km / ihora, ngaphandle izingxenye lapho sidlula emadolobheni. Ngokuqinisekile amacebo ekuqhubekeleni phambili kwezindaba imigwaqo Russian mzila ifakiwe okwesikhathi Ukulungiswa kwesakhiwo okuphelele, futhi endaweni km 37 kuya 173 uzokhokhelwa.
Umgwaqo ezindaweni eziningi, ngokwesibonelo, kusukela Obninsk ukuba Bryansk, isesimweni esingesihle, ngakho kufanele uqaphele. Ngendlela lihlangabezana izithiyo eziningi amanzi (Nara, Ugra, Oka, Snezhet et al.), Yikuphi ahanjiswa ngokusebenzisa amabhuloho nge umthamo umthwalo amathani 60 kuya ku-80.
Kuyo, Kaluga, futhi kuze kube semngceleni isimo, eziningi ezindaweni eziyingozi.
I-M18 umzila kuyodingeka leligama kuze 01/01/2018, ngemva kwalokho emgwaqeni womphakathi ukuthi lifakwa uhlu imizila waseRussia, uqambe kabusha P21 "Cola".
It kuvela Petersburg, ulandelisa Petrozavodsk, Murmansk, Pechenegs, sts komngcele Norway. indlela obuphelele cishe 1592 km. Ukuba ukuxhumana phakathi Leningrad esifundeni, Karelia futhi Murmansk, lokhu Indlela yedlula izindawo olunothile North Russian.
Umgwaqo iya udlule idolobha elinomlando eliyingqayizivele futhi ezikhangayo eziphawulekayo. Akubona bonke izingxenye umzila kungenziwa ngokuthi esibushelelezi ngokuphelele, futhi wathola imigwaqo, kodwa umqondo jikelele emendweni "Kola" okuhle ngenxa sezwe lapho kwayo.
On wonke umzila ifakwe iziteshi ukugcwaliswa amamotheli eminingi ukunikela abahambi hhayi kuphela iholidi izinga, kodwa futhi yokuzilibazisa ngezinga elingakanani. Futhi akukho ukushoda okusheshayo ukudla, amathilomu kanye izitolo lapho ungakwazi ubuyise amasheya abo ukudla namanzi.
Spa zokungcebeleka - Iyini? The best spa resort emhlabeni
Ski sihamba ski resort Red Glade. Ski dlula - kuyini?
Amapaki Water e Yaroslavl - i iholide okuthakazelisayo on ezihlukahlukene amanzi ezikhangayo
"Pectoris Angina": izimpawu, ukwelapha isifo
Zokugcina ngezandla zakhe